Rubber Slurry Pump Body (Casing) nke a ga - agbanwe na Warman SPR usoro Rubber Vertical Slurry Pump Anyị na - enye ọtụtụ casing casing, ka ndị ahịa wee nwee ike tinye ebe dị iche iche dị mgbagwoju anya. YAAO® Rubber Materials Anddị Na Nkọwa data YAAO Code Ihe aha aha Descriptiondị Nkọwa YR26 Anti Thermal Breakdown Rubber Natural Rubber YR26 bụ nwa, adụ eke roba. Ọ nwere oke mbuze na-eguzogide ihe ndị ọzọ niile na ngwa ngwa slurry dị mma. Ihe antiox ...
* Anyị na-enye ogidi nke nha dị iche iche iji hụ na ị nwere ike iji ha mee ihe omimi ọ bụla * Usoro nrube isi pụrụ iche iji zute ụdị mgbasa ozi acid-base * Ọfụma dị elu, oghere ịghasa ọkọlọtọ, ngwa ngwa na ngwa ngwa SPR Vetikal slurry nfuli Nhazi usoro * SPR slurry nfuli kọlụm data Model Back liner code Rubber ihe ogologo (MM) 40PV-SPR PVR4102 * R26, R55, R33, S01, S10, S12, S31, S42 600.900.1200.1500.1800 65QV-SPR QVR65102 * R26, R55, R33, S ...
-Ndị impeller nwere nnukwu na-emeghe amaokwu na ike nyefee slurry n'ụzọ dị irè, na-enye ezi ike na static itule iji nweta obere vibration na ala mkpọtụ na-arụ ọrụ. - opendị ihe mepere emepe na-egosipụta arụmọrụ dị elu ma ọ na-adịkarị ala iyi na mpaghara mpaghara ihu. -Ndị na-arụ ọrụ nke ọma, na-abawanye uru ma na-arụ ọrụ dị mfe -Ndị okpukpu abụọ na-emepụta ibu dị ala na-ebu ibu, na-amụba ndụ * SPR Rubber Lined Vertical Slurry Pumps Impeller data ...
* Anyị na-enye nhapu ọkpọkọ nke nha dịgasị iche iji hụ na ị nwere ike iji ha mee ihe omimi ọ bụla * Ọdịdị dị elu dị elu, oghere nkedo ọkọlọtọ, ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa. Nfuli SP (R) dị nfuli, nfuli slịpị slịpị centrifugal nke emikpuru na sump ka ọ rụọ ọrụ. Ezubere ha maka ịnapụta abrasive, nnukwu urughuru na slurries buru ibu. Mgbapụta ndị a adịghị mkpa akara aka ha na mmiri akara. Ha nwere ike ...
Akụkụ nke SPR vetikal slurry pump: 1) Elu arụmọrụ Na-enweghị mgbochi Ihe a haziri ahazi, ọnụ ụzọ ụzọ abụọ, ihe mmeghe, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị elu dị oke mma na-enweghị mgbochi, mgbapụta mgbapụta wdg. iji mezuo ya na ihe ntanetị nwere ike ịhọrọ ihe ha na ụdị ha na mgbasa ozi eburu ma nwee ike ijide n'aka arụmọrụ hydraulic kachasị mma na ndụ ọrụ na njem nke mgbasa ozi nwere ọka a kwụsịrị ...
L-Type slurry mgbapụta impeller
The roba mmiri akụkụ bụ oké na-eyi ndị na-eguzogide na corrosion-eguzogide, na-eji maka acid-arụ ọrụ ọnọdụ. Dị ka tailing na Ngwuputa ụlọ ọrụ, slurry na obere ahụ na-enweghị ike ike n'ọnụ. Akụkụ a na-ewepụsị ebe niile na-agụnye mkpuchi mkpuchi mkpuchi, akpịrị akpịrị, eriri efere akara, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ. Ihe rọba anyị ji mee ihe nwere ike iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ngwa slurry ọma. Ihe ndi ozo eji eme ihe na ihe anyi bu ...
Slurry pump roba liners bụ mmiri mmiri na nfuli slurry nfuli roba nke na-eduzi slurries gaa nfuli mgbapụta. Imirikiti nfuli slurry nfuli na-eji ụdị eriri roba agbaji agbaji, otu bụ eriri efere liner, na onye ọzọ bụ mkpuchi efere efere, etubere usoro a iji mee ka nnọchi dị mfe. A na-ejikarị rọba rọba ndị na-agba mmiri na-emepụta ihe na-emepụta roba R55 nke na-enye oge 1.5 ọrụ ndụ nke roba roba R26. * L-Type slurry nfuli impeller Data Model impeller code ...
L-Type slurry mgbapụta Cover efere liner
Akụkụ hydrocyclones anyị bụ 100% mgbanwe na ụwa ama ama. A na-eji roba R55 dị elu eme ihe YAAO na-etinye aka n'ịdị mma na ọrụ ndị ahịa na afọ ojuju. Anyị na-enye ndị ahịa anyị nhọrọ na site na hydrocyclone na-eyi linings, anyị na-ezube belata oge mmezi gị na ụgwọ ma nweta arụmọrụ na-agbanwe agbanwe maka hydrocyclones gị. Atụmatụ & Uru YAAO Hydrocyclone Liner egosila na ọ dị elu ma baa uru site na iji ọrụ nke ndị ahịa anyị ụwa ...
Ntinye ngwaahịa Ntugharị mgbapụta slurry nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa na ọrụ nke mgbapụta slurry. Site n'usoro, ọ nwere ike inyere slurry mgbapụta izute mkpa nke akụrụngwa. Ihe eji agbapụta slurry impeller dị mfe, n'ihi ya, anyị na-achọ ihe ndị pụrụ iche iji gbatịkwuo ndụ nke impeller. A na-eji ndị na-agbapụta ihe ndị na-agbapụta rọba na-emeso ndị na-eri ihe na-adịghị ọcha. A na-eji rọba emepụta, roba roba, EPDM Rubber, Nitrile Rubber, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị ka ...
The roba mmiri akụkụ bụ oké na-eyi ndị na-eguzogide na corrosion-eguzogide, na-eji maka acid-arụ ọrụ ọnọdụ. Dị ka tailing na Ngwuputa ụlọ ọrụ, slurry na obere ahụ na-enweghị ike ike n'ọnụ. Akụkụ a na-ewepụsị ebe niile na-agụnye mkpuchi mkpuchi mkpuchi, akpịrị akpịrị, eriri efere akara, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ. Ihe rọba anyị ji mee ihe nwere ike iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ngwa slurry ọma. Ihe ndi mmadu ji eme ihe na ihe ojoo anyi nwere anu ...
A na-eji mgbapụta slurry mgbapụta maka mgbapụta AH / HH / L / M slurry nfuli, mgbanaka mgbaaka na-arụkọ ọrụ yana onye na-azụ ahịa maka nfuli slurry ahụ. Ha enweghi ike inye aka mechie mgbapụta ahụ, kamakwa belata ike centrifugal. Nzube na ihe nke onye na-ere ahịa dị mkpa na ndụ ọrụ ya Akara a dabara adaba maka ọtụtụ slurry pumping applications. Ọ na-enye nnukwu uru na enweghị mmiri gland chọrọ. Onye na-ere ahia na-agba mgbanaka nke otu ihe ahụ ma na-arụ ọrụ na vanes na azụ f ...